चितवनको कालिका नगरपालिकाले ३९ वटा विपन्न चेपाङका लागि घर बनाउन थाल्यो ( फोटोफिचर सहित ) | PBM News.com
चितवनको कालिका नगरपालिकाले ३९ वटा विपन्न चेपाङका लागि घर बनाउन थाल्यो ( फोटोफिचर सहित )
चितवन ८ असार । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका विपन्न चेपाङका लागि घर बनाउन सुरु गरेको छ । आज ( सोमवार ) वडा नं. ७ बस्ने गणेश वहादुर प्रजाको घर निर्माणको काम सुरु भएको छ । कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले एकाविहानै घरको सिलन्यास गरेका छन् ।
मेयर आवाश कार्यक्रम अन्तर्गत कालिका नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्रका ३९ वटा विपन्न चेपाङका लागि घर बनाउन लागेको हो । वडा नं. ३,७,८, ९,१० र ११ मा विपन्न चेपाङ परिवारका लागि असार मसान्तभित्रै ३९ वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । सोमवार विहान कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले घरका सिलन्यास गरेसँगै घर निर्माणको काम सुरुभएको छ । घरको नक्सा निर्माण देखि अन्य प्राविधिक तयारी पुरा भएकाले घर बनाउन धेरै समय नलाग्ने कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले बताए ।
नगरक्षेत्रभित्रका अति विपन्न चेपाङ परिवारका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । घरको डिजाईन नगरपालिका आफैले गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार दुई कोठा, भान्छा र शौचालय भएको टिनले छाएको घर निर्माण हुनेछ । उच्चस्तरको ब्लकले बारेर बनाउन लागिएको घरको लागत ४ लाख ८४ हजार ४ सय रुपैयाँ हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए । असार मसान्त सम्ममा काम सक्ने गरी निर्माणको काम सूरु भएको हो ।
दोस्रो चरणमा आउँदो आर्थिक वर्षमा थप घर बनाइनेछ । ९५ वटा घर बनाउने नगरपालिकाको योजना थियो । लक डाउनका कारण अहिलेका लागि पहिलो चरमा ३९ वटा घर बनाउन लागिएको हो । बाँकी अर्कोवर्ष बनाउने गरी बजेटलाई क्रमागत रुपमा राखिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
घर निर्माणका क्रममा सामग्री नपुग्ने ठाउँमा ढुवानीमा घरधनीलाई श्रमदान गर्न अनुरोध गरिएको छ । नगरपालिकाले लाभग्राहीका लागि मापदण्ड तयार गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल प्रयोग रहेको घरको क्षेत्रफल, प्रतिव्यक्ति वर्गफिट, घरभित्रको भुइँ, घरको गारो, घरको छानो, जग्गाको स्वामित्वलगायतका मापदण्ड राखेर सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका परिवारका लागि नगरपालिकाले घर बनाइदिने निर्णयमा पुगेको हो । नगर क्षेत्रभित्रका चेपाङ समुदायको घर जीर्ण अवस्था र बस्न लायक नदेखिएपछि नगरपालिकाले क्रमशः घर बनाउने योजना अघि सारेको हो । वडा ७ का वडा अध्यक्ष डिल्लीराम दवाडीले अत्यन्तै अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई छनौट गरेर घर बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
वडा नं. ७ मा १० घरधुरी चेपाङ छन् । चेपाङ समुदायभित्रका पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्था गणेश प्रजाको देखिएकोले उनको घर बनाइदिने नगरपालिकाले निर्णय गरिएको हो । वडा नं. ७ मा मेयर आवाश कार्यक्रम अन्तर्गत एकवटा घरमात्रै निर्माण हुँदैछ । सानो झुप्रोमा पालटांगेर जीवनयापन गर्दै आएको गणेशवहादुर प्रजा नगरपालिकाको निर्णयवाट अत्यन्तै खुशी छन् । घामपानीबाट ओतलाग्ने समेत ठाउँ थिएन उनकी पत्नी शान्तीमाया प्रजाले भनिन हामीलाई नगरपालिकाले ठूलो गुन लगाउँदैछ ।
गणेशप्रजाको घर निर्माण सँगै छनौटमा परेका अन्य वडामा पनि घर निर्माणको काम सुरु भएको छ ।